Uma nithanda ukubukela opopayi libonisa ubungeke nakanjani thanda Donald Duck nge funny indlela abheka ngayo izinto ngezwi. Duck Scruffy is a itolitji emihlanu Slots umdlalo esekelwe umndeni ezimaphakathi amadada. Ungadlala lokhu engcono Slots ibhonasi isayithi umdlalo nge yayo 25 paylines okungaguquki. Ngemuva kwalesi game lingcangcazekile chibi-lotus izimbali futhi frog iqabunga. Umculo ikhathuni isitayela ngemuva ilokhu wena njalo uthokozile. Kunezinye izinhlamvu funny ngempela njengoba umdlalo izimpawu ukuthi wengeze isici fun itolitji. Umkhawulo ukubheja kule game isethwe nge okungenani 25p kanye max ngu- £ 250 spin ngayinye.
Mayelana unjiniyela Duck Scruffy
Lokhu emangalisayo ikhathuni isitayela ungadlala yakho engcono Slots ibhonasi isayithi yasungulwa ngu NetEnt. A ethandwa brand name e embonini yezokugembula ngamakhulu sonke semidlalo yasekhasino wadala kubasebenzisi inthanethi.
Kulesi funny opopayi based slot game, ungathola amatshwayo womndeni amadada. Ibhungu ibhizinisi indoda duck, duck wekhaya, duck engabafana nomfowabo omncane, duck abasha. Ukudlala amakhadi ngobugebengu Iqanda amagobolondo kukhona ephansi ukubaluleka izimpawu zalesi umdlalo ungadlala phezu engcono Slots ibhonasi isayithi. Duck besilisa okhokhela phezulu nge 400 izikhathi ezinhlanu zazo phezu payline. Kukhona izimpawu ezimbili ibhonasi in the game futhi kukhona i Babukeka babahle kepha mine ngimubi futhi omunye uphawu ibhonasi.
Ibhonasi Wild: Ugly uphawu Babukeka babahle kepha mine yinkulumo zasendle lo mdlalo futhi ihlanganisa zonke abanye. Lapho buvela inhlanganisela ngokuwina, uphawu ikhula duck amade futhi amahle ukumboza wonke esondweni. Ngakho ungalindela labo kwi big nge ngaphezulu izimpawu zasendle. Phakathi osebenzisa free, endle selivela ekwandiseni zasendle, zasendle njalo futhi zasendle cwe ukuthi ungafunda itolitji amathathu apheleleyo.
Chitha Isici: Kukhona logo ne Mahhala osebenzisa okukhulunywa kuwo futhi kuyinto sici chitha. Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho akwenzayo, udinga ukwazi ukuthi ukwenza kanjani. Uma udlala lo slot ku yakho engcono Slots ibhonasi isayithi, uzophawula izimpawu ezintathu chitha uvule ezinye izici ibhonasi. Kungaba Sinika yimuphi omunye izici ezinhlanu futhi siqukethe osebenzisa free kusukela eziyisithupha kuya nanhlanu.
Uma udlala lo mdlalo phezu engcono Slots ibhonasi isayithi, uyozibonela kumnandi kanye ibhonasi onqobayo ahlukahlukene.
Izinganekwane Fairytale: Hansel and Gretel
Casino inthanethi & Slots Pay by Phone Bill £5 FREE…